Shir Dib-U-Hesheesiin Ah Oo Magaaladda Baladweyn Ka Furmay | Duul News International
Shir Dib-U-Hesheesiin Ah Oo Magaaladda Baladweyn Ka Furmay	(Duulnews)-Wararka naga soo gaadhaya Magaaladda Baladweyn ee badhtamaha Somaliya,ayaa sheegaya in halkaas maalmihii ugu danbeeyay ay ku sii qul-qulayeen boqolaal Ergooyin ah,kana socday qeybaha kala duwan ee beelaha wada dega Gobolkaasi.
Ujeedka shirarkaas ayaa lagu sheegay inay yihiin qaar dib-u-heshiisiineed,oo la doonayo inay iska saamaxaan Beelahu dhibaatooyinkii soo kala gaadhay intii ay dalka ka socdeen dagaaladda Sokeeye.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaaliga ah ee Somaliya,ayaa iyaguna qeyb ka ah dadka madashaas kusoo qul-qulaya.
Wasiirkii hore ee arimaha Gudaha Dawladda Federaalka ee Somaliya Cabdiraxmaan Qoodax Barre,ayaa sheegay inay in is-saamaxa iyo heshiisiinta dadka walaalaha ahi ay ka mid tahay astaamaha toga nee soo jireenka u ah Umadda Somaliyeed.
“Dacaayadi Doorasho waxba kaagama tartmo”.Gudoomiye Cirro